ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်ပြုလုပ်မယ့် ရန်ပုံငွေပွဲမှာ သိန်း ၅၀ လှူခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး | Duwun
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အနုပညာရှင်များစုပေါင်းကာ ရန်ပုံငွေပွဲလုပ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအတွက် နေခြည်ဦးက ကျပ်သိန်း ၅၀ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရေဘေးဒဏ်ခံစားနေရတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အနုပညာရှင်များပူးပေါင်းပြီး ရန်ပုံငွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရန်ပုံငွေထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ အလှူရှင်တွေရဲ့ စာရင်းကိုတော့ Myanmar Media7က ကိုဝေမင်းမောင်က အခုလို ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
‘’မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအတွက် သြဂုတ်(၂၄) ရက်နေ့ရံပုံငွေပွဲ ဒီနေ့မနက်ခင်းပိုင်း လှူထားကြသော အလှူရှင်စာရင်း။ နေခြည်ဦး သိန်း ၅၀၊ Royal Club သိန်း ၄၀၊ ကိုနိုင်ဖြိုးကျော် ( Green Circle ) သိန်း ၂၀၊ မမာလာဝင်း ( UMG ) သိန်း ၂၀၊ မာလာမြိုင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီ သိန်း ၂၀၊ ကိုစံကိုကိုတင့်ဆန်း ၁၀ သိန်း၊ မခင်သီရိသက်မွန် ၁၀ သိန်း၊ ကိုစိုးလှိုင် ၅ သိန်း၊ ကိုဘိုဆန်း ( Bo Bo Film ) ၅ သိန်း၊ မဝတ်ရည်ထွေး (တော်ဝင် မိသားစု) ၅ သိန်း၊ ဒါရိုက်တာ နေဟိန်း ၅ သိန်း၊ ကိုကြည်သာဟန် ၃ သိန်း’’ ဆိုပြီးတော့ သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ ကျော်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ဒီရန်ပုံငွေပွဲမှာတော့ နေခြည်ဦးကလည်း ကျပ်သိန်း ၅၀ မတည်လှူဒါန်းခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်လေးကိုလည်း သူမကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။
‘’ ရေဘေးအတွက် နေခြည်တတ်နိုင်တဲ့ ငွေအား လူအားလေးနဲ့ပါဝင်သွားမယ့် အလှူငွေကောက်ခံပွဲ အစီအစဉ်လေးပါ။ ဘာလေးဘဲလှူဖြစ်လှူဖြစ် chillies တွေကြောင့် ရတဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်အားခငွေလေးတွေထဲကဘဲ ပြန်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်တာမို့ နေခြည့် ပရိသတ်တွေအတွက်ဘဲအမြဲရည်ရွယ်ပြီး လှူဒါန်းနေပါတယ်။ လပြည့်နေ့မှာ ချစ်တဲ့သူတွေဒီကုသိုလ်အတွက် သာဓုခေါ်နိုင်အောင်ပါ’’ လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ရန်ပုံငွေပွဲမှာ ပါဝင်ကြမယ့် အနုပညာရှင်တွေက SPECIAL9( ထူးအယ်လင်း ယုန်လေး Nine One၊ထက်ယံ သားသား Ice Cold Oakgar )၊ Frenzo ( စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ နန္ဒစိုင်း . SNARE G . Fatt . Bunny Phyoe .)၊ နှင်းဆီ အဖွဲ့( မင်းမော်ကွန်း ကျော်ကျော်ဗို ထွန်းထွန်း ရဲလေး )၊ ပြေတီဦး၊ သူထူးစံ ၊ ကျော်ထွဋ်ဆွေ၊ လွှမ်းပိုင် ၊X Box နေမင်း ၊ ဒေါင်း ၊ မိုးယံဇွန်၊ နေဒွေး ၊ ကျော်ကျော် ၊ ဒီဖြိုး ဝေလျှံ ၊ အောင်လေး ၊ Morris (Project K )၊ R Zar Ni ၊ ဟဲလေး ၊ ဖြိုးပြည့်စုံ ၊ ထက်ယံ ၊ ဝေကြီး ၊ နီနီခင်ဇော် ၊ အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် ၊ Jewel၊ ကေကေမိုး ၊ BPML စတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကလည်း ပါဝင်သွားဦးမယ်ဆိုတာကို ကိုဝေမင်းမောင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ကြေငြာထားပါသေးတယ်။